Hiainga anio ny delegasionina eo anivon`ny vaomiera mahaleotena misahana ny fifidianana (CENI) izay hanafatra ireo biletà tokana ireo. Marihana fa enina (6) andro no hanaovana ny fanontana azy ireo any Afrika Atsimo. Fantatra aloha fa mijanona ho laharana faha-25 ny kandida Marc Ravalomanana ary 13 ihany ny laharan`ny kandidà Andry Rajoelina. Tsy mbola tapaka kosa raha atao hifanila na hifanao ambony ambany ny endrika hanehoana ny biletà tokana. Miankina amin’ny fanapahan-kevitry ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana (HCC) kosa ny fanovana ny sary famantaran`ny antoko amin`ny fihodinana faharoa. Amin’ny faritra enina (6) no havantana ireo biletà tokana ireo dia Antananarivo, Antsiranana, Mahajanga, Sambava, Tolagnaro ary Toliara hialana amin’ny fahataran’ny fizarana. Manana dimy andro kosa ny CENI sy ny rantsamangaikany amin`ny fizarana aorian`ny fiaingan`ireo fiaramanidina avy ao Afrika Atsimo. Hotaterina amin`ny angidimby na fiaramanidina ihany koa izy ireo ary hozaraina isaky ny distrika ka ny kaominina no miandraikitra azy miaraka amin`ny fitanana an-tsoratra hiatrehana ny fifidianana.